DHAGEYSO: M/weyne Gaas oo la kulmay wafdi ka socda Beesha Caalamka – Radio Daljir
Maajo 1, 2016 4:43 g 0
Bosaso May 1, 2016- Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 1-May-2016 ku qaabilay qasriga Madaxtooyada dawladda Puntland ee magaalada Boosaaso wefti balaadhan oo ka kala socday dawladda Talyaaniga, dawladda Federaalka Soomaaliya iyo urur goboleedka IGAD.
Weftiga ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Boosaaso ku soo dhoweeyey Xubno ka tirsan golaha xukuumadda dawladda Puntland, maamulka gobolka Bari, kan degmada Boosaaso iyo dadweyne kale oo ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada reer Boosaaso.
Garoonka caalamiga ah ee Boosaaso oo wejigiisii koowaad dhowaan la soo gebagebeeyey ayaa dhaqaalaha ku baxay waxa bixisay dawladda Talyaaniga sidoo kalena wejiga labaad oo ay ku baxayso xaddi dhaqaale oo badan ayaa waxaa bixinaysa dawladda Talyaaniga.
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in waftigu ay u yimaadeen ka qayb galka daah-furka dhammaystirka wejiga labaad ee garoonka caalamiga ee Boosaaso oo maalinta berri ah lagu qaban doono isla garoonkaasi munaasabad ballaadhan oo lagu daah-furi doono mashruucaasi.
Madaxweynaha dawlada Puntland ayaa dawladda talyaaniga uga mahadnaqay taageerooyinka ay u fidiyeen dawlada Puntland islamrahaantaane sheegay in dawladda talyaanigu ay tahay dawladda keliya ee Puntland ka hirgelisey mashaariicda ugu waawey tan iyo markii la’ aasaasay dawladda Puntland 1998-dii iyo xiliyidii sideetamaadkiiba, isla markaana sheegan in shacabka Puntland iyo dawladdiisuba aanay iloobi doonin sida ay u garab is taagtey dawadda Talyaanigu.